Warshadaha weelka muraayadaha Shiinaha waxay soo sheegeen koror xasilloon sanadka 2019
Warshadda muraayadda weelka ee Shiinaha ayaa ka diiwaan gashan horumarka xasilloonida sanadkii la soo dhaafay iyada oo ay jiraan dadaallo lagu xoojinayo qaab-dhismeedka dhinaca tayaynta, sida ay sheegtay Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Macluumaadka (MIIT).
Sanadkii 2019-kii, soosaarkii muraayadda saxan ayaa wada 930 milyan oo xaaladood oo culeys ah, taasoo kor u kacday 6.6 boqolkiiba sanadkii sanadkii, wasaaraddu waxay ku sheegtay bayaan internetka ah.
Burburkii, koobkii qaboojiyaha ahaa iyo dhalooyinka ayaa ka warbixiyay kororka wax soo saarka ee 4.4 boqolkiiba iyo 7.6 boqolkiiba siday u kala horreeyaan sannad-sanadeed.
Celcelis ahaan sicirka warshadaha ee galaaska wejiga ayaa taagnaa 75.5 yuan (oo qiyaastii 10.78 doolarka Mareykanka ah) xaalad kasta oo culeys ah muddadan, waa 0.2-boqolkiiba kordhay sanad ka hor, xogta MIIT ayaa muujisay.
In kasta oo ay hoos u dhacday cadaadiska, dakhliga hawlgalka waaxdu wuxuu gaadhay 84.3 bilyan yuan, ilaa 9.8 boqolkiiba sanadkii sanadkii.
Si kastaba ha noqotee, warshadda dhalada weelka ayaa soo sheegtey hoos u dhac ku yimid faa'iidooyinka la helay iyo xaddiga iibka marka la barbar dhigo sanadkii hore, sida ay sheegtay wasaaraddu.
Qiimaha dhoofinta muraayadda muraayadda ah ee 2019 ayaa gaadhay 1.51 bilyan oo doollarka Mareykanka ah, oo hoos uga dhacday 3 boqolkiiba sanadkii, halka qiimaha soo dejinta uu sare u kacay 5.5 boqolkiiba una dhiganta 3.51 bilyan oo doollarka Mareykanka ah, sida ay muujisay xogta MIIT.